Somalia :Xiisad Dagaal oo ka taagan gobolka Shabeelaha Hoose
Home Wararka Maanta Somalia :Xiisad Dagaal oo ka taagan gobolka Shabeelaha Hoose
Wararka laga helayo deegaanka Buula Yarey oo 5 KM dhinaca waqooyi ka xiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa ku waramaya in wali ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxaysa laba maleeshiyo beeleed oo wada daga degaankaasi oo horay uu dagaal ku dhex maray.
Xaaladda deegaanka Buula Yarey ayaa wali kacsan, waxaana laga cabsi qabaa in markale dagaal uu ka qarxo, maadaama maleeshiyaadkii deegaankaasi ku diriray aan wali la kala qaadin.
Wax garadka deegaanka ayaa wado dadaalo lagu doonayo in lagu kala qaado maleeshiyaadka, waxayna sidoo kale qaarkood sheegeen in loo baahan yahay in wax walba wada hadal lagu dhameeyo.
Cuqaasha ayaa sidoo kale ku eedeeyay maamulka degmada Afgooye in uusan xil iska saarin sidii loo hakin lahaa colaadaasi ka soo cusboonaatay deegaanka Buula Yareey, waxayna ugu baaqeen in si deg deg ah uu soo fara galiyo arintaasi.
Gobolka Shabeellaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed waxaa dhow jeer oo hore ka dhacay dagaalo u dhexeeyay maleeshiyo beeleed gobolka wada daga, balse maamulka ayaa haatan looga fadhiya sidii uu arintaasi wax uga qaban lahaa.
War kasoo baxay Madaxtooyadda Puntland ayaa looga hadlay dagaalka iyo waxyaabaha...